UMary Sharpe, uSihlalo - Isisekelo Somvuzo
Ikhaya UMary Sharpe, uSihlalo
UMary Sharpe wazalelwa eGlasgow futhi wakhula emndenini ozinikezele enkonzweni yomphakathi ngokufundisa, umthetho kanye nemithi. Kusukela esemncane, wathakazeliswa ngamandla engqondo futhi ubelokhu efunda ngakho kusukela ngaleso sikhathi.
Ezemfundo kanye nokuPhuthukiswa kobuchwepheshe
UMary uqede iziqu zeMasters of Arts eNyuvesi yaseGlasgow ngesiFulentshi nangesiJalimane ngesayikholoji nefilosofi yokuziphatha. Ulandele lokhu nge-Bachelors degree kwezomthetho. Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe wasebenza njengommeli kanye noMmeli iminyaka eyi-13 eyalandela eScotland kanye neminyaka emi-5 e-European Commission eBrussels. Wabe esenza umsebenzi wokuphothula iziqu eNyuvesi yaseCambridge futhi waba ngumfundisi lapho iminyaka eyishumi. Ngo-10 uMary wabuyela e-Faculty of Advocates, eScotland Bar, wayovuselela umsebenzi wakhe wasenkantolo. Ngo-2012 uhambe engazilolongi ukusungula iThe Reward Foundation. Uhlala eyilungu leKolishi Lezobulungiswa kanye neFakhalthi Yabameli.
UMary ube nezindima ezintathu zobuholi eThe Reward Foundation. NgoJuni 2014 wayengusihlalo wokusungula. NgoMeyi 2016 wangena esikhundleni sokuba yiChief Executive Officer lapho ayibamba khona kwaze kwaba nguNovemba 2019 lapho esebuyele kwiBhodi njengoSihlalo.
I-University of Cambridge
UMary waya eNyuvesi yaseCambridge ngo-2000-1 ukuyokwenza umsebenzi wokuphothula iziqu ngothando lwezocansi kanye nobudlelwano bamandla obulili esikhathini se-Classical Antiquity kuze kufike e-Era Era yokuqala. Izinhlelo ezingqubuzanayo zenani elibonakala ngaleso sikhathi esibaluleke kakhulu zisenomthelela emhlabeni namuhla ikakhulukazi ngenkolo nangamasiko.
UMary wahlala eCambridge iminyaka eyishumi eyalandela.
Ukusekela ukusebenza kwe-Peak
Ngaphezu komsebenzi wakhe wokucwaninga, uMary waqeqeshelwa ukuba ngumgqugquzeli we-workshop eNyuvesi nezinhlangano ezimbili zamazwe omhlaba, eziwina imiklomelo zisebenzisa ucwaningo oluvela kwi-psychology ne-neuroscience ngendlela esetshenzisiwe. Kwakugxilwe ekuthuthukiseni ukuqina kwengcindezi, ukuxhumana nabanye nokuba ngabaholi abaphumelelayo. Ubuye wasebenza njengomeluleki wabafundi bamabhizinisi nanjengombhali wesayensi we I-Cambridge-MIT Institute. Lokhu kubambisana phakathi kweMassachusetts Institute of Technology (MIT) kanye neYunivesithi yaseCambridge.
Ukubambisana kwakhe eNyuvesi yaseCambridge kuhlala kokubili ISt Edmund's College futhi Lucy Cavendish College lapho eyiLungu elihambisanayo.
UMary uchithe unyaka njengoScholar Visiting eSt Edmund's College, University of Cambridge e2015-16. Lokhu kwamvumela ukuthi agcine ithuba lokucwaninga kwisayensi evelayo yokulutha kokuziphatha. Ngaleso sikhathi wakhuluma ezingqungqutheleni eziyishumi nambili zikazwelonke nezamazwe omhlaba. UMary ushicilele udaba oluthi “Amasu Wokuvimbela Umlutha Wezithombe Zobulili Ezikwi-inthanethi” atholakalayo lapha (amakhasi 105-116). Uphinde wabhala ngokubhala isahluko Ukusebenza Nezigebengu Zocansi - Umhlahlandlela Wabasebenza eshicilelwe nguRoutledge.
Kusukela ngoJanuwari 2020 kuze kube ukuvalwa kokuqala kwalolu bhubhane, uMary wayeseLucy Cavendish College njengeScholaring Visitor. Ngaleso sikhathi washicilela i- iphepha noDkt Darryl Mead lapho ucwaningo lwesikhathi esizayo ekusetshenzisweni kwezithombe zocansi oluyinkinga kufanele luye khona.
UMariya uqhubeka nomsebenzi wokulutha ukuziphatha njengelungu le- I-International Society for the Study of Ukuziphatha Ngokweqile. Wethule iphepha engqungqutheleni yabo yesi-6 yamazwe omhlaba eyayiseYokohama, eJapan ngoJuni 2019. Uyashicilela ucwaningo kule ndawo evelayo ezincwadini ezibuyekezwa kontanga. Iphepha lamuva lingatholakala lapha.
Ukuzijabulisa kobuchwepheshe nobuciko (TED)
Umqondo we-TED usekelwe "emibonweni efanele ukwabiwa". Kuyipulatifomu yezemfundo nokuzijabulisa etholakala zombili njengezinkulumo ezibukhoma naku-inthanethi. UMary waya eTED Global e-Edinburgh ngo-2011. Ngokushesha ngemuva kwalokho wacelwa ukuba ahlele owokuqala I-TEDx Umcimbi waseGlasgow ngo-2012. Esinye sezikhulumi ebezihambele lo mcimbi bekunguGary Wilson ohlanganyele lokho akutholile kwakamuva kulokho akuthandayo iwebhusayithi yourbrainonporn.com mayelana nomthelela wezithombe zocansi eziku-inthanethi ebuchosheni enkulumweni ebizwa "Ukuzama Kakhulu Okubalulekile". Kusukela lapho leyo nkulumo ibukwe kaningi ngaphezulu kwezigidi ezingama-13.6 futhi ihunyushelwe ezilimini ze18.
UGary Wilson wandisa inkulumo yakhe ethandwayo encwadini enhle kakhulu, manje encwadini yesibili, eyabizwa Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha. Ngenxa yomsebenzi wakhe, izinkulungwane zabantu basho kumawebhusayithi okubuyisa izithombe ezingcolile ukuthi imininingwane kaGary ibakhuthaze ukuthi bazame ukuyeka izithombe zobulili ezingcolile. Baye babika ukuthi impilo yabo yezocansi nezinkinga ezingokomzwelo zaqala ukuncipha noma zanyamalala selokhu bayeka izithombe zobulili ezingcolile. Ukusiza ekusabalaliseni igama ngalezi zinguquko ezithinta impilo nezibalulekile, uMary wasungula i-The Reward Foundation noDkt Darryl Mead ngomhla ka-23 Juni 2014.
Ukusetshenziswa kocansi kuyindaba yokuzikhethela kwabantu abadala. Asizimisele ukuyivimba kepha sikholwa ukuthi ngumsebenzi onobungozi obukhulu nakulabo abangaphezu kweminyaka eyi-18. Sifuna ukusiza abantu benze ukhetho 'olunolwazi' ngalo ngokuya ngobufakazi obuvela ocwaningweni olutholakalayo njengamanje. Sikholelwa ukuthi kungcono impilo nenhlalakahle ukuchitha isikhathi sithuthukisa amakhono ezenhlalo adingekayo ukwenza ubudlelwano obuseduze busebenze isikhathi eside.
I-Reward Foundation ikhankasela ukunciphisa ukufinyelela kwezingane kalula ezithombeni ezingcolile ze-inthanethi ngoba inqwaba ye ucwaningo amaphepha akhombisa ukuthi kuyalimaza ezinganeni ezisesigabeni sazo sokuba sengozini ye- kobuchopho. Izingane ku i-autistic spectrum futhi ngezidingo ezikhethekile zokufunda zisengozini yokulimala. Kube nokukhuphuka okumangazayo kwe ukuhlukumeza ngokocansi kwengane eminyakeni eyi-7 eyedlule, ekulimaweni okuphathelene nocansi okuhlobene nocansi ngokusho kochwepheshe bezokwelapha abaye emihlanganweni yethu yokufundisa futhi mhlawumbe ngisho ukufa. Sivuna imizamo kaHulumeni wase-UK ezungeze ukuqinisekiswa kweminyaka kubasebenzisi njengoba okokuqala futhi kuyindlela yokuvikela ingane. Njengoba uMthetho Wezomnotho Wedijithali Ingxenye III ubekelwe eceleni, sinethemba lokuthi uhulumeni uzosheshisa umsebenzi woMthethosivivinywa We-Harms ku-inthanethi. Lokhu akuyona inhlamvu yesiliva, kepha yindawo enhle yokuqala. Ngeke isuse isidingo semfundo mayelana nobungozi.
Imiklomelo kanye nokuzibandakanya
Usihlalo wethu uthole imiklomelo eminingana selokhu i-2014 yathuthukisa umsebenzi weSisekelo. Kuqale unyaka wokuqeqeshwa ngokusebenzisa Umklomelo Osekelwa Uhulumeni weScotland Innovation Incubator. Lokhu kwethulwe I Ukuqeda Pot e-Edinburgh. Kwalandelwa yimiklomelo emibili yokuqala evela kwa-UnLtd, emibili isuka ku-Educational Trust kanti enye ivela kwiBig Lottery Fund. UMary usebenzise imali evela kulemiklomelo ukuphayona ama-detoxes edijithali ezikoleni. Ubuye wenza nezinhlelo zezifundo mayelana nezithombe zocansi othisha okufanele bazisebenzise ezikoleni. Ku-2017 usize ukuthuthukisa umhlangano wosuku wonyaka ovunyelwe yiRoyal College of General Practitioners. Iqeqesha ochwepheshe ngomthelela wezithombe zocansi ze-inthanethi empilweni yengqondo nangokomzimba.
UMary wayeseBhodi yabaqondisi beNhlangano Yokuthuthukiswa Kwezempilo Yezocansi e-USA kusukela ngo-2016-19 futhi wakhiqiza ama-workshops okugunyazwa abahlengikazi bezocansi kanye nabafundisi bezocansi mayelana nokusetshenziswa kabi kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi yintsha. Unikele ephepheni leNational Organization for the Treatment of Abusers on “Prevention of Harmful Behaviour Sexual” futhi waphinde waletha imihlangano yokufundisana emi-3 kubasebenzi mayelana nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi ekuziphatheni okubi ngokocansi.
Kusuka ku-2017-19 uMary wayeyi-Associate eCentre for Youth and Criminal Justice eNyuvesi yaseStrathclyde. Igalelo lakhe lokuqala ubekhuluma emcimbini we-CYCJ ngomhlaka 7 Mashi 2018 eGlasgow. Amangqamuzana amhlophe namaseli ejele: Ukuhlangabezana nezidingo ze-neurodevelopmental kanye nokucatshangelwa kwabantu abasha abasengozini.
Ngo-2018 waqokwa waba ngomunye we I-WISE100 abaholi besifazane emabhizinisini omphakathi.
Lapho engasebenzi, uMary uthanda ukugijima, i-yoga, ukudansa nokwabelana ngemibono emisha nabangani.
Xhumana noMariya nge-imeyili ku mary@rewardfoundation.org.